Apr. 17, 2021 08:05 AM EDT
Prisoners wait for transport following their release from Chikurubi prison on the outskirts of Harare, Saturday, April 17, 2021. Zimbabwe began the release of about 3,000 prisoners under a presidential amnesty aimed at easing congestion and minimizing the threat of COVID-19 across the country's overcrowded jails. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Apr. 17, 2021 08:16 AM EDT
Apr. 17, 2021 08:00 AM EDT
Prisoners walk out of prison following their release at Chikurubi prison on the outskirts of Harare, Saturday, April 17, 2021. Zimbabwe began the release of about 3,000 prisoners under a presidential amnesty aimed at easing congestion and minimizing the threat of COVID-19 across the country's overcrowded jails. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Apr. 17, 2021 08:07 AM EDT
A female prisoner is seen inside the prison premises at Chikurubi prison on the outskirts of Harare, Saturday, April 17, 2021. Zimbabwe began the release of about 3,000 prisoners under a presidential amnesty aimed at easing congestion and minimizing the threat of COVID-19 across the country's overcrowded jails. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A prison guard directs prisoners following their release from Chikurubi prison on the outskirts of Harare, Saturday, April 17, 2021. Zimbabwe began the release of about 3,000 prisoners under a presidential amnesty aimed at easing congestion and minimizing the threat of COVID-19 across the country's overcrowded jails. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Prisoners wait for transport following their release from Chikurubi prison on the outskirts of Harare,Saturday, April 17, 2021. Zimbabwe began the release of about 3,000 prisoners under a presidential amnesty aimed at easing congestion and minimizing the threat of COVID-19 across the country's overcrowded jails. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Apr. 17, 2021 08:20 AM EDT